အသင်းခေါင်းဆောင် ရာထူးအတွက် ဂုဏ်ယူမိကြောင်း မာတီနက်ပြေကြား
Posted By:	Times of News November 30, 2017 0
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကွင်းလယ်လူ မာတီနက် အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့တဲ့ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါပွဲစဉ်မှာ အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ရတာ ကြောင့် ဂုဏ်ယူမိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မိုချန်ဂလာဘတ်အသင်းနဲ့ ပွဲစဉ်မှာ အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ မာတီနက်ဟာ အသက် ၂၉ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ဘိုင်ယန်အသင်းသမိုင်းမှာ ပထမ ဆုံး စပိန်ကစားသမားတွေထဲက အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မာတီနက်အသင်းရဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်မှာ ပြောကြားခဲ့တာကတော့ “ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မစတင် ခင်မှာ နည်းပြဖြစ်သူက ဘိုတန်မကစားနိုင်ဘူးလို့ ပြောကြားခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ ဘိုင်ယန် အသင်းနဲ့ ပွဲထွက်ကစားမယ့် လူစာရင်းမှာ ကျွန်တော်က စီနီယာကျတဲ့ […]
Tiger posts rock-solid 69 in lapse to golf
Tiger Woods returned from 10 months inagolfing forest to put himself right inabrew duringaHero World Challenge. While Englishman Tommy Fleetwood – uninformed from his stirring Race to Dubai feat over Justin Roseaintegrate of weeks ago – snatched […]
LA vs New York – Kids Edition published: 19 Oct 2017 views: 1008179 Since Jimmy always enjoysaadversary betweenacities, we set adultacamera organisation on any seashore and asked kids in New York to speak about LA, and kids from LA […]
BuzzFeed laying off employees as promotion direct weakens
more Article source: https://article.wn.com/view/2017/11/30/BuzzFeed_laying_off_employees_as_advertising_demand_weakens/
Sam Allardyce has doneathespian turnaround by similar to turn Everton’s new manager on an 18-month contract, replacing caretaker trainer David Unsworth. After formerly enmity himself fromaToffees pursuit inaarise of Ronald Koeman’s sacking – due to feeling likea‘second […]
Silva pens City extension
Manchester City midfielder David Silva has been rewarded for his excellent start toadeteriorate withaone-year agreement prolongation that ties him toabar until 2020. The Spain general helpedaCitizens setanew record on Wednesday when they kick Southampton 2-1 […]